बुधवार, असार २०, २०७५
परम्परागत ठेकी लोप हुँदै
ग्रामीण क्षेत्रका पशुपालक किसानले दूध जमाएर दही र मही बनाउन प्रयोग गर्दै आएका परम्परागत ठेकी लोप हुन थालेका छन् । दुुहुना पशु भएका परिवारले दूध जमाउनका साथै मही पार्नका लागि प्रयोग गर्ने परम्परागत ठेकी धातुबाट निर्मित आधुनिक सामग्रीका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
तनहुँमा दुईको मृत्यु
विद्यालय जाने क्रममा सालको रुख ढलेर किच्दा मंगलबार व्यास–६ शिशाघाटमा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने दुई बालिका घाइते भएका छन् ।
कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा ठप्प
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई समर्थन गर्दै जुम्लाबासी तथा चिकित्सक सडकमा उत्रिएका छन् । प्रहरी निगरानीकै बीच अनसन जारी राखेका डा. केसीको समर्थनमा मंगलबार जुम्लाबासीले आँखामा पट्टि र शरीरमा साङ्लो बाँधेर अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् ।
रेडक्रसको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय
मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षा बढी भएकाले बाढीपहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाएको छ ।
अवकाशअघि प्रधानसेनापतिको चीन र बर्मा भ्रमण
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री सेवा निवृत्त हुनुअघि चीन र बर्माको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएका छन् । डेढ साता लामो भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति क्षेत्री मंगलबार म्यानमार प्रस्थान गरेका हुन् ।
कृषि उपजको केन्द्र बन्दै राँके
राँके बजार पाँचथर र इलामको सिमामा रहेको बजार हो । मेची राजमार्गमा पर्ने यो बजार कृषि उपजका लागि चर्चित बन्दै गएको छ । मेची राजमार्गले चिरेको यो सानो सुन्दर लेकाली बजारमा प्रायः समय चिसो हुन्छ ।
महोत्सवमा ५८ लाख बचत
दाङ व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सव एवं औद्योगिक कृषि प्रदर्शन–२०७४ बाट ५८ लाख २७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बचत भएको छ ।
सुनीता दनुवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर. पोम्पेओ तथा अमेरिकी राष्ट्रपतिकी सल्लाहकार इभाङ्का ट्रम्पले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव बेचबिखनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, २०१८ वाशिङ्टन डीसीमा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
अपांगता भएकाका लागि अझ बढी अवसरको आह्वान
सरकारका साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका संस्था, संयुक्त अधिराज्य सरकार र यूनिसेफले अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतासम्म पुग्न अझ बढी अवसरहरू प्रदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।
बाढीपहिरोले ३ दिनमा २७ को मृत्यु
मनसुन सक्रिय भएपछिको अविरल वर्षाका कारण ३ दिनमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । गएको शनिबार यता बाढी÷पहिरो, डुबान तथा घर भत्किएर रोल्पा, सिन्धुली, रौतहट, नवलपरासी लगायत जिल्लामा २४ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
प्रकोपपीडितको राहतमा पनि सरकारको अंकुश
सरकारले प्रकृतिक प्रकोपबाट भौतिक क्षति पुगेका परिवारलाई राहत नदिनेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’ को मस्यौदामा सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्च कटौतीको योजना बनाएको हो ।
राजस्व छल्दै मुगुका व्यापारी
मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश व्यापारीले राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । आफ्नो व्यापार व्यवसाय सरकारी निकायमा दर्ता नगरी यहाँका व्यापारीले राजस्व छली गरेका हुन् ।
प्रकोपबाट २ महिनामा २७५ को मृत्यु, ६७ करोडको धनमाल क्षती
प्राकृतिक प्रकोपबाट २ महिनामा करिव ३ सय जनाको मृत्यु भएको छ ।
माछा उत्पादनमा झापा आत्मनिर्भर
माछापालक किसानको संख्या वृद्धि भएपछि झापा माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा माछाको ब्लक छुट्याएर एक हेक्टर क्षेत्रफल बराबर ३ लाख रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन थालेपछि झापामा अधिकांश किसानले माछापालन व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् ।
पोखरामा चरा उत्सव हुने
पर्यटकीय नगरी पोखरामा यही असार १९ गतेदेखि चरा उत्सव (पोखरा बर्ड फेयर) २०७५ हुने भएको छ ।